သင်၏ Mac ကိုအသစ်ပြောင်းသည့်အခါ၎င်းသည်လုပ်သင့်သည် ငါက Mac ကပါ
OS X El Capitan ၏ဗားရှင်းသစ်၊ အထူးသဖြင့်ဗားရှင်းအားဆင်းသက်ပုံရသည် OS X ကို 10.11.1၎င်းသည်လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသည့်အပြင်ချည်များစွာလည်းရှိသည်။ ဒါတစ်ခုပါ y ဒါနောက်တစ်ခုပါ ရာပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများကိုညည်းညူကြသည့် Apple ဖိုရမ်များအကြောင်း သူတို့ကဒီ update ကို၏ installation ကိုစဉ်အတွင်းချိတ်ဆွဲကြပြီ။
ပြbetterနာတစ်ခု၏အကြောင်းအရင်းကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြရန်၊ update ကိုတပ်ဆင်စဉ်ကွန်ပျူတာသည်တိုးတက်မှုပြဘားကိုပြသပြီး၎င်းသည် ၇၅% ရောက်သောအခါ၎င်းသည်လုံးဝအေးခဲနေပြီးကွန်ပျူတာသည်ဘဝ၏လက္ခဏာမပြပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ အသုံးပြုသူအချို့သည် power ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာကိုအတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်သည်။
ကောင်းပြီဟုတ်တယ်၊ ဒီ update ကို install လုပ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာတွေက installation လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအတော်လေးမြန်ပြီးအရင် update များကဲ့သို့မပြုမူကြောင်းသတိရပါ တိုးတက်မှုဘားသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်ထူးဆန်းစွာပြုမူခြင်းမရှိပါ။
ဤကိစ္စတွင် system update ကိုစတင်ပြီးနောက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စုစုပေါင်းအချိန်မှာမိနစ် ၃၀ ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။ ယခုအချိန်အထိအရာအားလုံးမှန်ကန်သည်။ ပထမ ၁၅ မိနစ်ကကွန်ပျူတာသည်လျင်မြန်စွာပြန်လည်စတင်သင့်သည့်အချိန်နှင့်အမှန်တကယ်ပြောသောနာရီထက် ပို၍ မြန်သည် တပ်ဆင်မှု၏ဒုတိယအပိုင်းကိုဆက်လုပ်ရန်အသုံးပြုသူများ၏ဆံပင်ကိုရပ်တန့်စေသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အေးခဲနေသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်။
၂၁.၅ လက်မအကျယ်ရှိ HDD ပါဝင်သည့် ၂၁.၅ လက်မအရွယ် iMac တွင် ၇ မိနစ်ခန့်ကြာပြီး SSD ပါသည့် ၁၁ လက်မ MacBook Air တွင်သုံးမိနစ်ခန့်လောက်ကွန်ပျူတာတွင်ဘဝနိမိတ်လက္ခဏာများမပြသဘဲလုံးဝပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ပုံရသည်၊ ထိုအချိန်နောက်ပိုင်းတွင် system သည်ထပ်မံသက်ဆိုင်ပြီး installation ကိုပြီးဆုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပေးသည့်အရာသည်တပ်ဆင်သည့်အခါအလျင်အမြန်မဖြစ်ရန်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုခွင့်မပြုပါနှင့်။ ဤ update တွင် installation interface ၏အမြင်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြနေသည် ၎င်းတို့သည်အဖွဲ့အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာနှင့်မှန်ကန်စွာညှိနှိုင်း။ မရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » သင်၏ Mac X ကို OS X 10.11.1 သို့မွမ်းမံသောအခါသင်လုပ်သင့်သည်
ဒါကကျွန်တော့်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စ၍ Continuity နှင့်သဟဇာတမဖြစ်သော Macbook Air ရှိသည်။ သီအိုရီအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းစသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ Macboo Air သို့ခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ သူတို့အားအင်္ဂါရပ်များ!?
သင် ... Mavericks ကတည်းကကတည်းကအဲဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလား ၎င်းသည် ၂၀၁၀ မှဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုကောင်းစွာပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ယခု iOS 2010 တွင်သင်အတွက်အထူးရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။
မွမ်းမံခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်ပြproblemsနာမရှိဘဲ update လုပ်ပါပြီ
နှောင့်နှေးမှလွဲ။ အဘယ်သူမျှမပြproblemနာ; ငါ system ကိုအလိုအလျှောက် update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားစာ၏နောက်ဆုံးသတင်းစကားလည်းရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားစဉ်နောက်ကွယ်၌ပြုလုပ်ပါကသို့မဟုတ် Windows တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုတပ်ဆင်ပါကမည်သည့်အချိန်ကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ၁၂ နာရီကျော်ကြာပြီးဘားမှာ ၇၅ နှစ်ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။
update ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး၊ တစ်နာရီကျော်ကြာမှဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ သည်းခံခြင်းထက်အခြားမည်သည့်အကြံပြုချက်များ?
ထို့နောက်ငါ ACUTE လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ! ပြီးခဲ့သည့်3နှင့်တူမှတ်ချက်များပိုမိုနှင့်7နာရီအတွင်းအတွက် update လုပ်ဖို့ဘာမျှမရှိပါတယ် !!!! ကိုယ့်အဲဒီမှာ pucha ။
ကျွန်ုပ်ကြိုးပမ်းမှုနှစ်ခုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။ ၁၂ နာရီကျော်စောင့်ဆိုင်းနေပြီးလုံးဝဘာမှမပါ။ နောက်ဆုံးတော့ timemachine မိတ္တူတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ရယူခဲ့ပါတယ်။
ဤအမှုများတွင်ကျွန်ုပ်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်မှာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ခြစ်ရာမှအရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်ယူခြင်း https://www.soydemac.com/como-instalar-de-cero-os-x-el-capitan/ ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမပြုဘဲအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအခက်အခဲရှိသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။